NK | प्रधानमन्त्री हाम्रो पनि बा सरह हुनुहुन्छ,अब बिरामी बा लाई आराम गर्न दिऊँ: गगन थापा
प्रधानमन्त्री हाम्रो पनि बा सरह हुनुहुन्छ,अब बिरामी बा लाई आराम गर्न दिऊँ: गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्राम दिन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार संसदको विषय समयमा बोल्दै उनले सिंगापुरमा उपचाररत प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ लाभको कामना गरे । साथै विदेश उपचार गर्नु परेमा सरकारले उपचार खर्च नव्यहोर्ने कानुन पालना गरेकोमा धन्यवाद दिए ।
प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको कस्टोडियन भएको भन्दै कांग्रेस सांसद थापाले भने, ‘कार्यकारी प्रमुख एकै पटक लामो समयसम्म देश बाहिर बस्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक मर्यादा आदिमा जोखिमको प्रश्न त छँदैछ, प्रत्येक २/३ महिनामा १०/१२ दिन विदेश गएर टेलिप्रिजेन्टमार्फत मन्त्रीहरुको ब्रिफिङ लिएर देश चलाएर शासकीय जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन ।’
सत्तारुढ नेकपासँग बहुमत भएको र पार्टीमा प्रधानमन्त्री भइसकेका र हुने इच्छा राख्ने व्यक्तिहरु पनि भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन विश्राम दिन नचाहेको भन्ने प्रश्न गरे ।
नेकपाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ‘बा’ भनेर सम्बोधन गरेको सुनेको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री हाम्रो पनि बा सरह हुनुहुन्छ । हामी हाम्रो बा बिरामी हुनु भएको भए के भन्थ्यौं ? बा, धपेडी नगर्नुस् । आराम गर्नुस् । विश्राम लिनुस् ।’
‘हामी हाम्रो बालाई त्यसो भन्छौं तर प्रधानमन्त्री बालाई यसो भन्न किन सक्दैनौं ? यो गल्ती हिजो हामीले पनि गर्‍यौं । र, सबैभन्दा बढी नजिक बस्ने मान्छेले अन्याय गर्‍यो । यो अन्याय तपाईहरु नगर्नुस् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्राम गर्न दिनुस् ।’
प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, शान्ति प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याएको तथा स्वाभिमानको लडाइँमा अथक योद्धाका रुपमा काम गरेका ओलीलाई लामो समय अभिभावकका रुपमा हेर्न चाहेको उनले बताए ।
सांसद थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको मनको इच्छाको सम्मान गर्छु र फेरि पनि कामना गर्छु कि फर्किएर आएपछि प्रधानमन्त्रीले रोष्टममा उभिएर हामीलाई बताइदिने अवस्था बनोस् । हामी सबै प्रार्थना गर्छौं कि विश्राम नलिन, काम गर्न सक्ने हुनुहोस् । आवश्यकता पर्दा २४/७ काम गर्न सक्ने हुनुस् । तर त्यस्तो अवस्था आउँदैन भने …।’